Wiil 13 sano jir ah oo u geeriyooday cudurka Coronavirus & dunida oo fajac ku noqotay – HalQaran.com
Caalamka Wararka Maanta
April 1, 2020 April 1, 2020 Halqaran	0 Comments Wiil 13 sano jir ah oo u geeriyooday cudurka Coronavirus & dunida oo fajac ku noqotay
London (Halqaran.com) – Dhibbanihii ugu da’da yaraa adduunka ayaa ugu geeriyooday cudurka Coronavirus magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Ismacil Mohamed Abdulwahab, waa wiil 13 sano jir ah oo ka soo jeeda qoys muslim ah oo ku nool Brixton, oo kutaala koonfurta London, ayaa geeriyooday isagoo aan wax xubin ah oo qoyskiisa kamid ah ka ag dhowayn sababto la xiriira faafitaanka Fayraska Corona.
Qoyska Ismaaciiil Maxamed oo horey aabahood ugu dhintay kansar uu qabay, ayaa yidhi: “Ismaaciil wuxuu bilaabay inuu muujiyo astaamo wuxuuna ku adkaatay neefsashada waxaana la dhigay Isbitaalka King College‘‘.
Afhayeen u hadlay cisbitaalka King’s College ayaa markii dambe xaqiijiyay geerida wiilka, iyagoo yiri: “Nasiib xumo, wiil 13 sano jir ah oo laga helay cudurka ‘COVID-19’ ayaa u geeriyooday Fayraska.”
Dhimashada wiilkaan yarka ah waxay meesha ka saaraysaa aragtidii sheegaysay in cudurkaan uu dilo dadka waaweyn ee da’da ah, waxaa kaloo xusid mudan in cuudrkaan uu kasoo kabtay qof jira ama ka weyn 100 sano.
← Madaxweyne Muuse Biixi oo cafis u fidiyay 574 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada Somaliland
Paris Club members agree to cancel Somalia’s USD 1.4 billion debt →
DEG DEG Wasiirka Amniga Jubbaland ee Ka baxsaday DFS oo Gaaray Magaalada Kismaayo
January 31, 2020 Duuliye 0
January 10, 2020 January 10, 2020 HalQaran Staff 0
December 3, 2019 December 3, 2019 Halqaran 0